Usoro na ọnọdụ maka nde ndị na-eme ya | Usoro ojiji - Nde ndị na-eme ya
Usoro na ọnọdụ maka nde ndị na-eme ya | Usoro ojiji
Biko chọta n'okpuru na ndị ọhụrụ Nde Makers usoro na ọnọdụ ("Usoro ojiji").
Biko gụọ Usoro ndị a nke ọma. Tonweta, na ojiji nke ngwaahịa nde ndị mepụtara ("Ngwaahịa"), ọrụ nde Ndị Ọrụ ("Ọrụ"), yana webụsaịtị nde nde ndị mebere https://MillionMakers.com/ ("Weebụsaịtị") ma ọ bụ subdomain (s) ọ bụla, gụnyere nke ọ bụla n'ime ọdịnaya ya, dabere na nkwekọrịta gị na Usoro ndị a. Ikwesiri iguta, kwenye, ma nabata usoro na onodu niile di na Usoro ndi a. Site na ịmepụta akaụntụ, ma ọ bụ site na iji ma ọ bụ ịga na weebụsaịtị anyị ma ọ bụ ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ anyị, ị ga-ejikọrịrị Okwu ndị a ma na-egosi na ị nabatara usoro ndị a.
Akaụntụ Nde Nde Gị
Ọ bụrụ na ịmepụta akaụntụ na weebụsaịtị, ị na-ahụ maka ijide nchedo nke akaụntụ gị, ị na-ahụ maka ọrụ niile na-eme n'okpuru akaụntụ ahụ na omume ọ bụla ọzọ metụtara na akaụntụ ahụ. Agree kwenyere ịnye na jigide ozi ziri ezi, nke ugbu a na nke zuru oke, gụnyere ozi ịkpọtụrụ gị maka ọkwa na nkwukọrịta ndị ọzọ sitere n'aka anyị na ozi ịkwụ ụgwọ gị. Maynweghị ike iji ozi ụgha ma ọ bụ na-eduhie eduhie na akaụntụ gị, ma ọ bụ ahia na aha ma ọ bụ aha ndị ọzọ, na nde ndị na-eme ihe nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ wepu ozi ọ bụla ọ na-ewere dị ka ihe na-ezighi ezi ma ọ bụ iwu na-akwadoghị, ma ọ bụ na ọ nwere ike igosipụta nde ndị na-eme nzọrọ na nkwupụta nke ndị ọzọ. Kwenyere na anyị nwere ike ime ihe iji chọpụta izi ezi nke ozi ị nyere anyị.
Na-ahụ maka ịme ihe ndị ezi uche dị na ya iji jigide nzuzo nke aha njirimara na paswọọdụ gị. Ga-emerịrị ihe ruru nde ndị mepụtara ozugbo maka ojiji nke ozi gị, akaụntụ gị ma ọ bụ mmebi nche ọ bụla Ndị na-eme nde mmadụ agaghị akwụ ụgwọ maka omume ma ọ bụ ihe ọ bụla ị mere, gụnyere mmebi ọ bụla nke ụdị omume ọ bụla ma ọ bụ enweghị.
Ibu Ọrụ nke Ndị Ọrụ nke Nde, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ
Accessnweta gị “MillionMakers.com”, yana iji ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ ga-abụrịrị nke iwu kwadoro ma ọ ga-erubere Usoro niile, yana nkwekọrịta ọ bụla ọzọ dị n’etiti gị na nde ndị mepụtara na / ma ọ bụ MM Ngwọta INC na / ma ọ bụ Nde Nde LLC na / ma ọ bụ MM LLC na / ma ọ bụ Nde Nde Ngwọta INC na / ma ọ bụ MM LTD. na / ma ọ bụ Nde Nde LTD.
Mgbe ị na-abanye ma ọ bụ na-eji weebụsaịtị “MillionMakers.com”, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, ị ga-akpa àgwà na obodo na nkwanye ugwu oge niile. Anyị machibidoro ojiji ọ bụla nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ị kwenyere na ị gaghị eji weebụsaịtị, maka nke ọ bụla n'ime ihe ndị a:
Itinye aka n'omume nke ga-abụ mmebi iwu, na-ebute ọrụ obodo ma ọ bụ na-emebi obodo ọ bụla, steeti, iwu mba ma ọ bụ iwu mba ụwa nke ga-emeghị ịgbaso usoro ịntanetị anabatara.
Kwukọrịta, na-ebunye, ma ọ bụ na-ezigara ndị ọzọ ihe nwebiisinka ma ọ bụ ndị ọzọ nwere nke ndị ọzọ belụsọ na ịnwere ikike nwebisiinka ma ọ bụ nwee ikike nke onye nwe ha biputere ya.
Ikwurita okwu, izisa ozi, ma ọ bụ izipu ihe na-ekpughe ihe nzuzo dị n’ahịa, belụsọ ma inwere ya ma ọ bụ nwee ikike nke onye nwe ya.
Ikwurita okwu, izisa, ma ọ bụ biputere ihe emetọ ihe ọgụgụ isi ọ bụla, ikike nzuzo ma ọ bụ mgbasa ozi nke onye ọzọ.
Gbalị igbochi n'ụzọ ọ bụla na weebụsaịtị, ma ọ bụ netwọk anyị ma ọ bụ nchebe netwọk, ma ọ bụ ịnwa iji weebụsaịtị anyị iji nweta ikike na-enweghị ikike na kọmputa kọmputa ọ bụla.
Ingnweta data ezubereghị gị, ma ọ bụ ịbanye na sava ma ọ bụ akaụntụ, nke ị na-enyeghị ikike ịnweta.
Attgbalị nyocha, nyochaa ma ọ bụ nwalee nsogbu nke usoro ma ọ bụ netwọk ma ọ bụ imebi nchebe ma ọ bụ nyocha nyocha na-enweghị ikike kwesịrị ekwesị (ma ọ bụ nwee ihe ịga nke ọma)
Gbalị igbochi ma ọ bụ igbochi ọrụ nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ọ bụ ndokwa anyị nke Ọrụ na ndị ọrụ ọ bụla nke Weebụ, ndị na-eweta nnabata anyị ma ọ bụ netwọkụ anyị, gụnyere, na-enweghị njedebe, site na ịnyefe nje na weebụsaịtị, overloading, "idei mmiri", "mail bombu" ma ọ bụ "na-akụda" weebụsaịtị.
Na mgbakwunye, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na akaụntụ, na-enye aka na akaụntụ, tinye ihe na weebụsaịtị, tinye njikọ na weebụsaịtị, ma ọ bụ na-eme ka ihe onwunwe dị site na weebụsaịtị (ihe ọ bụla dị otú ahụ, "Ọdịnaya"), ị bụ naanị maka ọrụ maka ọdịnaya nke, yana mmerụ na mmebi ọ bụla sitere na Ọdịnaya ahụ. Nke ahụ bụ ikpe n'agbanyeghị agbanyeghị ọdịnaya dị na ya bụ ederede, eserese, faịlụ ọdịyo, ma ọ bụ sọftụwia kọmputa. Site n'ime ka ọdịnaya dị, ị na-anọchite ma nye ikike na:
nbudata, idetuo na iji ọdịnaya ahụ agaghị emebi ikike ikike, gụnyere ma ọnweghị oke na ikike nwebisiinka, patenti, ụghalaahịa ma ọ bụ ikike nzuzo azụmaahịa, nke ndị ọzọ ọ bụla.
ọ bụrụ na onye were gị n'ọrụ nwere ikike ọgụgụ isi ị mepụtara, ịnwere (i) nata ikike ederede n'aka onye were gị n'ọrụ ka ọ biputere ma ọ bụ mee ka Ọdịnaya ahụ dị, gụnyere ma ọnweghị oke na sọftụwia ọ bụla, ma ọ bụ (ii) nwetara n'aka onye were gị n'ọrụ dịka ikike niile dị na ma ọ bụ ọdịnaya.
ị kwenyere n'ụzọ zuru ezu na ikikere ọ bụla nke atọ metụtara Ọdịnaya, ma mee ihe niile dị mkpa iji gafee nke ọma na ndị ọrụ njedebe usoro ọ bụla achọrọ.
Ọdịnaya ahụ enweghị ma ọ bụ wụnye nje, ikpuru, malware, ịnyịnya Trojan ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ na-emebi ma ọ bụ na-ebibi ihe.
Ọdịnaya ahụ abụghị adịgboroja, ma ọ nweghị ọdịnaya azụmaahịa na-adịghị mma ma ọ bụ nke achọghị iji mee ka okporo ụzọ gaa na saịtị ndị ọzọ ma ọ bụ bulie ogo njin ọchụchọ nke saịtị ndị ọzọ, ma ọ bụ iji mekwuo omume ezighi ezi ma ọ bụ iwu na-ezighi ezi (dị ka phishing) ma ọ bụ duhie ndị nnata dị ka gaa na isi iyi nke ihe (dika spoofing).
Ọdịnaya ahụ abụghị nke rụrụ arụ, nke jọgburu onwe ya, nke ịkpọasị ma ọ bụ nke agbụrụ ma ọ bụ nke agbụrụ, ma na-emebi iwu nzuzo ma ọ bụ nke mgbasa ozi nke ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ihichapụ Ọdịnaya, Nde ndị na-eme ga-eji ezi uche na-ewe iji wepu ya na weebụsaịtị na sava anyị, mana ị kwenyere na enweghị ike ịchọta ma ọ bụ zoo aka na Ọdịnaya ahụ na ọha na eze ozugbo.
Na ahụta maka ịkpachapụ anya dịka ọ dị mkpa iji kpuchido onwe gị na sistemu kọmputa gị site na nje, ikpuru, ịnyịnya Trojan, na ọdịnaya ndị ọzọ na-emebi ma ọ bụ na-ebibi ihe. Nde nde ndị na-eme ihe ga-akpachapụ anya iji gbochie nnyefe nke ọdịnaya na-emerụ ahụ site na sistemụ teknụzụ ya na sistemụ teknụzụ gị.
Nde nde ndị na-emefu ihe ọ bụla gbasara mmebi ma ọ bụ mmebi ọ bụla sitere na nnweta ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ọ bụ ohere ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị ndị na-abụghị nde.
Nde nde Makers nwere ikike (ọ bụ ezie na ọ bụghị ọrụ ahụ) iji (i) jụ ma ọ bụ wepu ọdịnaya ọ bụla na, na nde ndị na-eme nde uche nwere ezi uche, na-emebi iwu Million Makers ọ bụla ma ọ bụ na-emebi emebi ma ọ bụ na-enweghị isi, ma ọ bụ (ii) kwụsị ma ọ bụ gọnarị ohere na ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, nye onye ọ bụla n'ihi ihe ọ bụla, na Nde nde ndị na-eme naanị uche.
Esgwọ na ịkwụ ụgwọ
Site na ịzụta Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ, ị kwenyere ịkwụ ụgwọ nde ndị mepụtara na / ma ọ bụ MM Solutions INC na / ma ọ bụ nde ndị na-eme LLC na / ma ọ bụ MM LLC na / ma ọ bụ Million Makers Solutions INC na / ma ọ bụ MM LTD. na / ma ọ bụ Nde ndị na-eme LTD. ọnụahịa / ụgwọ mbụ na ụgwọ ndenye aha kwa afọ egosiri maka ụdị Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ a. Nkwụ ụgwọ ga-abụ dịka nke ụbọchị mbụ ị debanyere aha maka Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ga-ekpuchi kwa ọnwa, nkeji iri na ise, ọkara kwa afọ ma ọ bụ oge kwa afọ, dịka egosiri mgbe ị debanyere aha ma kwụọ ụgwọ maka ụgwọ mmeghari ohuru.
Ntọala na ọnụahịa nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ nwere ike ịgbanwe n'oge ọ bụla, na nde mmadụ na-eme oge niile nwere ikike ịgbanwe nhazi, ụgwọ, ọnụahịa na nkwupụta, ọ bụrụhaala na enweghị mgbanwe mgbanwe ọ bụla ga-emetụta ya gị n'oge ndebanye aha, ma ọ ga-adị ire mgbe nde nde ndị rụpụtara ma ị kwenyela na ndọtị, nwelite ma ọ bụ mmeghari nke okwu ndenye aha. You kwenyere mgbanwe ọ bụla dị otú ahụ ma ọ bụrụ na ịnweghị ịjụ idegara nde nde ndị na-eme akwụkwọ n'ime ụbọchị atọ (3) azụmaahịa nke ịnweta ọkwa nke nde ndị mepụtara, ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa, na-etinye ma ọ bụ na-ekwupụta ụgwọ na / ma ọ bụ mgbanwe ọnụahịa. Ọnụahịa niile bụ nke naanị, ị ga-akwụkwa ụtụ isi niile, ọrụ, ụtụ ma ọ bụ ụgwọ, ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ yiri ya nke enyere ndị na-eme nde mmadụ ma ọ bụ gị onwe gị site na ikike ụtụ isi ọ bụla (na-abụghị ụtụ isi etinyere na ego nde ndị na-eme ego), metụtara iwu gị, belụsọ ị nyelarị nde nde ndị na - eme akwụkwọ nnabata ma ọ bụ akwụkwọ nnabata kwesịrị ekwesị maka ọnọdụ nnyefe, nke bụ ebe a na - eji ma ọ bụ rụọ ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere mgbanwe na iwu nke na a na-atụ ụtụ isi nke bụ ma ọ bụ bụrụ nke a na-apụghị ịchọta akwụ ụgwọ yana mmụba na-akwụ ụgwọ maka nde ndị mepụtara nke na-ebuga ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ, nke na-esikwa na ụdị oke nde nde ndị a nwere ikike ịbawanye ahịa ya na retroactively.
Iji ọdịnaya nke atọ, sọftụwia, ngwa, ọrụ yana akụrụngwa
Nde nde ndị na-emeghị nyocha, na enweghị ike inyocha, ihe niile, gụnyere ngwanrọ kọmputa, ezigara na weebụsaịtị, yabụ enweghị ike ịza ajụjụ maka ọdịnaya, ojiji ma ọ bụ mmetụta nke ihe ahụ. Site na iji webụsaịtị ahụ, nde nde ndị na-eme ihe anaghị anọchite anya ma ọ bụ na-egosi na ọ na-akwado ihe edepụtara ebe ahụ, ma ọ bụ na ọ kwenyere na ụdị ihe ahụ ziri ezi, bara uru ma ọ bụ na-adịghị emerụ ahụ. Weebụsaịtị nwere ike ịnwe ọdịnaya nke na-adịghị mma, na-adịghị mma, ma ọ bụ na-adịghị mma, yana ọdịnaya nwere enweghị nghọta na teknụzụ, ndenye ederede, na njehie ndị ọzọ. Weebụsaịtị ahụ nwekwara ike ịnwe ihe mebiri ikike nzuzo ma ọ bụ ikike mgbasa ozi, ma ọ bụ na-emebi ikike ọgụgụ isi na ikike ndị ọzọ nwere ikike, nke ndị ọzọ, ma ọ bụ nbudata, ịdegharị ma ọ bụ ojiji nke dị n'okpuru usoro na ọnọdụ ndị ọzọ, ekwupụta ma ọ bụ ekwupụtaghị. Nde nde ndị na-eme ihe arụ na-ajụ ọrụ ọ bụla maka mmerụ ahụ na / ma ọ bụ mmebi ọ bụla sitere na iji ma ọ bụ nbudata nke mgbasa ozi nke ndị ọzọ na weebụsaịtị.
Ọdịnaya ezigara na weebụsaịtị ndị ọzọ
Anyị enyochabeghị, na enweghị ike inyocha, ihe niile, gụnyere ngwanrọ kọmputa, nke enyere site na weebụsaịtị na ibe weebụ nke MillionMakers.com jikọtara, yana njikọ ahụ na MillionMakers.com. Nde nde ndị na-eme ihe enweghị ikike ọ bụla na weebụsaịtị na webpages ndị na-abụghị nde nde ha anaghị arụ ọrụ maka ọdịnaya ha ma ọ bụ ojiji ha. Site na ijikọ na webụsaịtị ma ọ bụ webpage ndị na-abụghị Nde, ndị nde Nde anaghị anọchite anya ma ọ bụ gosi na ọ na-akwado ụdị weebụsaịtị ma ọ bụ webpage ahụ.
Nkwupụta Ziri Ezi
Dika Nde ndi na eme ndi choro ka ndi ozo kwanyere ikike ikike ọgụgụ isi ya, o na-akwanyere ikike ikike ikike nke ndi ozo ugwu. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ihe dị na weebụsaịtị ahụ ma ọ bụ jikọọ ya na-emebi ikike nwebisiinka gị, a na-agba gị ume ịgwa nde ndị na-eme ya na info@millionmakers.com. Nde ndị na-eme ihe ga-, dịka ọ nwere ike, ịzaghachi na ọkwa niile dị otú a, gụnyere nke achọrọ ma ọ bụ nke kwesịrị ekwesị site na iwepu ihe mebiri emebi ma ọ bụ gbochie njikọ niile na ihe mebiri emebi. Iji mee ka ihe gbasara ịda iwu banye anyị, biko zitere anyị ozi, ị ga-enyerịrị onye ọrụ DMCA anyị ozi ndị a:
(a) etinyere aka na kọmputa nke onye enyere ikike imechitere onye nwe ya nwebiisinka ọrụ;
(b) njirimara nke ikike nwebiisinka na ọnọdụ dị na weebụsaịtị nke ọrụ megidere iwu;
(c) nkwupụta edere na ị nwere ezigbo okwukwe na onye nwe ya, onye nnọchi anya ya ma ọ bụ iwu akwadoghị ya.
(d) aha gị na ozi ịkpọtụrụ gị, gụnyere nọmba ekwentị na adreesị ozi-e; na
(e) nkwupụta ị kwupụtara na ozi ahụ dị n'elu dị na ọkwa gị ziri ezi yana, n'okpuru ntaramahụhụ ụgha, na ị bụ onye nwebisiinka nwebisiinka ma ọ bụ nye ikike ime ihe n'ihi onye nwebisiinka.
Ozi kọntaktị nke Onye Ọrụ DMCA anyị maka ọkwa nke nkwupụta mmebi iwu nke US bụ: MM Solutions Inc., email: info@millionmakers.com.
N'ihe banyere onye ọrụ nke nwere ike imebi ma ọ bụ na-emebi iwu nwebisiinka ma ọ bụ ikike ikike ọgụgụ isi ndị ọzọ nke nde ndị mepụtara ma ọ bụ ndị ọzọ, Nde ndị nwere ike, na uche ya, kwụsị ma ọ bụ gọnahụ ịnweta na ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ. N'ihe banyere njedebe dị otú ahụ, nde ndị na-eme ihe agaghị enwe ọrụ ọ bụla iji nye nkwụghachi nke ego ọ bụla a kwụrụ nde mmadụ nde mmadụ maka nkwanye ọ bụla dị otú ahụ.
Nde ndị na-eme ya, akara nde ndị mepụtara, na ụghalaahịa ndị ọzọ niile, akara ọrụ, eserese na akara ngosi ejiri na njikọ weebụsaịtị, Ngwaahịa na Ọrụ, bụ ụghalaahia ma ọ bụ ụghalaahia edenyere nke nde Ndị Mere ma ọ bụ nde ndị nyere ikike. Ụghalaahịa ndị ọzọ, akara ọrụ, eserese na logos ejiri na njikọ weebụsaịtị, Ngwaahịa, na Ọrụ, nwere ike ịbụ ụghalaahịa nke ndị ọzọ nke atọ ma ọ bụrụ na ụdị ikike a bụ maka uru na ojiji nke anyị belụsọ ma ekwuru ya n'ụzọ ọzọ, ma ọ bụ nwere ike ịbụ ngwongwo nke ndị nwe ha. Ojiji nke weebụsaịtị a enyeghi gi ikike ma o bu ikike imeghari ma obu jiri ndi ozo nde Nde ma obu ahia nke ato. N'otu aka ahụ, ị ​​nweghị ikike ma ọ bụ ikike iji mụta ma ọ bụ jiri akara ụghalaahịa gị ọ bụla, akara ọrụ gị, eserese na / ma ọ bụ logos, belụsọ na ị nyere ikikere.
You nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta gị wee mechie akaụntụ gị na nde ndị na-eme oge ọ bụla, rụọ ọrụ ụbọchị ikpeazụ nke okwu ndenye aha gị, site na izipu ozi email na info@MillionMakers.com. Nde nde ndị na-eme ihe nwere ike ịkwụsị mmekọrịta gị na gị, ma ọ bụ nwere ike kwụsị ma ọ bụ kwụsịtụ ịnweta na weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ n'oge ọ bụla, gụnyere iji ngwanrọ ọ bụla,
ọ bụrụ na ị daa Usoro ndị a na / ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla ndị ọzọ na Nde ndị mebere ya;
ma ọ bụrụ na Nde ndị na-emepụta ihe na-enyo enyo na ị na-eji weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ iji mebie iwu ma ọ bụ mebie ikike ndị ọzọ;
ọ bụrụ nde nde ndị na-eme atụmatụ na-enyo enyo na ị na-anwa iji aghụghọ ma ọ bụ jiri iwu nde ndị na-eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi;
ọ bụrụ na Nde ndị na-eme nde ihe na-enyo enyo na ị na-eji Weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ n'ụzọ aghụghọ, ma ọ bụ na Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ enyere gị bụ ndị ọzọ na-eji aghụghọ;
ma ọ bụrụ na ị daa ịkwụ ụgwọ ego ọ bụla ruru nde ndị mepụtara;
ị na-emebi iwu ma ọ bụ usoro iwu ọ bụla. Mgbe ịchisịrị akaụntụ Nde Nde gị maka ihe ndị a dị n'elu, a gaghị enwe nkwụghachi ụgwọ na a ga-egbochi gị ịnweta weebụsaịtị, Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ ndị ahụ, gụnyere data ya niile.
Nde ndị na-eme ihe nwere ike ịkwụsị nkwekọrịta ọ bụla na ịnweta akaụntụ gị, ma ọ bụrụ na Ọrụ ma ọ bụ akụkụ ọ bụla, adịkwaghị iwu na ikike gị, ma ọ bụ na ha agaghịzi enwe azụmaahịa, na Nde nde ndị mebere naanị ..
Ọ bụrụ na ị kwenyere na nde ndị mepụtara emezughị ma ọ bụ Ọrụ ahụ nwere nkwarụ, ị ga-agwarrịrị nde nde ndị na-ede ihe ma kwe ka ụbọchị iri atọ (30) were mee ka nde ndị mepụtara gwọọ ntụpọ ahụ. Ọ bụrụ na Nde ndị na-eme ihe na-agwọ ntụpọ ahụ n'ime oge ọgwụgwọ a, nde ndị na-eme agaghị enwe ndabara na enweghị ike ịdaba ya maka mmebi na / ma ọ bụ ọghọm na ụdị ndabara ahụ. Ọ bụrụ na nde ndị na-eme ihe adịghị agwọ nkwarụ ahụ n'oge oge ọgwụgwọ a, ịnwere ike ịkwụsị ndenye aha na mmetụta ozugbo, na ọkwa edere nde nde ndị mepụtara.
Mgbanwe ọdịnaya, ngwaahịa na ọrụ
Ntọala na nkọwa nke weebụsaịtị, gụnyere na-ejedebeghị ọdịnaya niile dị ebe ahụ, Ngwaahịa, na Ọrụ ndị ahụ nwere ike ịmezi na / ma ọ bụ emelitere site n'oge ruo n'oge, naanị otu uche nke nde ndị na-eme ya. Changes ga - ejikọrịrị mgbanwe ọ bụla ma ọ bụ mmelite ọ bụla, belụsọ na ụdị mgbanwe a ga - ebelata arụmọrụ na uru weebụsaịtị, Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ.
Mmachi nke Akwụkwọ ikike nke nde ndị mepụtara ya, ndị na-ebunye ya yana ndị nyere ya ikikere
Nde nde ndị nyere ikike ka nde ndị ahịa nyere ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ ndebiri, ma ọ bụrụhaala na ndị ahịa a akwụgo ụgwọ niile ruru, ma ha anaghị emezue ọrụ ọ bụla maka nde ndị na-eme ya, nnweta Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ (“oge elu”) nke pasent iri itoolu na asatọ (98%) kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ebumnuche kpatara naanị nde nde ndị na - eme oge anaghị ezute, nde ndị mepụtara anaghị akwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ ụdị "emebi emebi emebi", Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ anaghị enwe mmebi mebiri oge ọrụ. I kwenyere na ọ ga-esi ike ịchọpụta ego ole ị ga-emebi ma ọ bụrụ na ị gaghị emezu oge ahụ. Also kwetakwara na usoro ịkwụ ụgwọ a dị n'elu agaghị eme ka ụdị mmebi mmiri ọ bụla mebiri emebi na-akpata ụdị nhụjuanya ọ bụla na ego nke ọnwụ gị. Agbanyeghị, ọ bụrụ na Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ adịghị maka gị maka ihe kpatara naanị nde ndị mepụtara maka oge ịga n'ihu nke ụbọchị ise (5) ma ọ bụ karịa, ịnwere ike ịkwụsị nkwekọrịta gị na ederede ozugbo, ị nwere ike ịrịọ nloghachi nke ụgwọ akwụ ụgwọ gị metụtara na-adịghị adị Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ, pro-rata ndị fọdụrụ ejibeghi okwu nke nkwekọrịta gị.
Nde ndị na-eme ya na ndị nyere ya ikikere anaghị ekwe nkwa ma ọ bụ ihe nnọchite anya ọ bụla gbasara weebụsaịtị, Ngwaahịa, na Ọrụ, ma ọ bụ saịtị ọ bụla ejikọtara ma ọ bụ ọdịnaya ya, gụnyere ọdịnaya, ozi na ihe dị na ya ma ọ bụ izi ezi, izu ezu, ma ọ bụ oge nke ọdịnaya , ozi na akụrụngwa. Anyị anaghị enye gị ikike ma ọ bụ na-anọchi anya na ịnweta ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ọ bụ saịtị ọ bụla nwere njikọ agaghị egbochi ma ọ bụ nwee njehie ma ọ bụ nkwanye, na a ga-edozi ntụpọ ahụ, ma ọ bụ na weebụsaịtị, Ngwaahịa , na / ma ọ bụ Ọrụ, ma ọ bụ saịtị ọ bụla ejikọtara na-enweghị nje virus kọmputa ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-emerụ ahụ. Anyị ebughi ibu ọrụ ọ bụla, anyị agaghị aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla, ma ọ bụ nje nwere ike ibute, akụrụngwa kọmputa gị ma ọ bụ ihe ndị ọzọ maka ojiji nke Ngwaahịa ma ọ bụ Ọrụ ahụ, ma ọ bụ ohere ịnweta, ojiji, ma ọ bụ ihe nchọgharị gị. Weebụsaịtị, ma ọ bụ nbudata ma ọ bụ bulite ọdịnaya ọ bụla site na ma ọ bụ weebụsaịtị. Ọ bụrụ na afọ ojuju adịghị na weebụsaịtị ahụ, naanị ihe ga-egbo mkpa gị bụ ịkwụsị weebụsaịtị.
Enweghị ndụmọdụ, nsonaazụ ma ọ bụ ozi, ma ọ bụ ọnụ ma ọ bụ ederede, nke ị nwetara site n'aka nde ndị mepụtara, ma ọ bụ site na weebụsaịtị, ga-emepụta akwụkwọ ikike ọ bụla ekwupụtaghị ebe a. Nde nde ndị na-eme iwu anaghị akwado, nkwado, nkwado, ịgba ume ma ọ bụ kwenye na ọdịnaya ọ bụla ma ọ bụ ọdịnaya ọ bụla nke onye ọrụ, ma ọ bụ echiche ọ bụla, nkwanye, ọdịnaya, njikọ, data ma ọ bụ ndụmọdụ ekwupụtara ma ọ bụ na-egosi n'ime ya, nde ndị na-eme mkpọtụ na-ekwupụta ihe ọ bụla na ikike niile njikọ na ọdịnaya onye ọrụ na ọdịnaya ọ bụla ọzọ, akụrụngwa ma ọ bụ ozi dị na ma ọ bụ site na weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ, nke ndị ọrụ ma ọ bụ ndị ọzọ ndị ọzọ mepụtara ma ọ bụ nyere.
Biko rịba ama na ụfọdụ ikike nwere ike ọ gaghị ekwe ka mwepu nke akwụkwọ ikike egosi, yabụ ụfọdụ mwepu ndị dị n'elu nwere ike ọ gaghị emetụta gị. Lelee iwu mpaghara gị maka mmachi ma ọ bụ mmachi ọ bụla gbasara mwepu nke akwụkwọ ikike egosi.
Mmachi nke Ọrụ nke Nde Mere, ya Suppliers na ndị nyere ya ikikere
N’ọnọdụ ọ bụla, otu ọ bụla, ndị enyemaka ya na ndị mmekọ ya, ndị isi ha dị iche iche, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ya, na ndị nnọchi anya ndị ọzọ, ga-aza ajụjụ maka mmebi ọ bụla na-apụtachaghị ìhè, na-akpata, ihe ndapụta, ọpụrụiche, ma ọ bụ mmekpa ahụ, gụnyere mana ọnweghị oke na uru furu efu nkwụsị azụmahịa, ma na nkwekọrịta ma ọ bụ na mmekpa ahụ, gụnyere nleghara anya, na-esite n'ụzọ ọ bụla site na iji webụsaịtị, Ngwaahịa, Ọrụ, na / ma ọ bụ ọdịnaya ya, ma ọ bụ nke weebụsaịtị ọ bụla ejikọtara ọnụ ọbụlagodi na a na-agwa ndị otu a hoo haa na enwere ike. nke mmebi dị otú ahụ. Ewezuga mmebi metụtara ihe iwu kwadoro ma ọ bụ kwenye nke ịda iwu ọgụgụ isi nke Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ nke ndị ọzọ nyefere na-enweghị ọdịnaya ọ bụla nke atọ, ọ nweghị ihe ga-eme ka ọrụ otu gafere ngụkọta ego ndị nde ndị meere n'aka gị n'oge a. ọnwa iri na abụọ (12) ozugbo tupu ụbọchị ahụ emebi emebi mbụ.
Nnọchite na Akwụkwọ ikike gị
Represent na-anọchite anya ma nye ikike na ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ ga-adị na nkwekọrịta ọ bụla dị n'etiti gị na nde ndị na-eme ya, ndị nde amụma nzuzo, Usoro ndị a, yana iwu na ụkpụrụ ọ bụla metụtara, gụnyere na enweghị mmachi iwu ọ bụla ma ọ bụ ụkpụrụ mpaghara ọ bụla na obodo gị, obodo, obodo, ma ọ bụ mpaghara gọọmentị ndị ọzọ, gbasara omume ịntanetị na ọdịnaya anabata, yana gụnyere iwu niile metụtara metụtara nnyefe nke teknụzụ data sitere na obodo ibi na ya, ma jiri iwu ma obu uzo ozo.
N'okpuru oke adịghị ike dị na nke a, ndị otu ahụ kwenyere ịgbachitere, nyeghachi ibe ha ego, ma jigide ibe ha na-adịghị njọ, gụnyere ndị enyemaka ya na ndị mmekọ, ndị isi ha, ndị isi ọrụ, ndị ọrụ ma ọ bụ ndị nnọchi anya ha, na ndị nnọchi anya ndị ọzọ, site na imegide ebubo niile, ọnwụ, mmebi, ụgwọ, na ụgwọ (gụnyere mana ọnweghị oke ụgwọ ụgwọ ndị ọka iwu na ụgwọ ụlọ ikpe), na-esite, metụtara ma ọ bụ metụtara:
mmebi iwu nke Usoro ndị a, ma ọ bụ nkwekọrịta ọ bụla n'etiti ndị ọzọ, ma ọ bụ
ebubo ọ bụla na ozi ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla (gụnyere ọdịnaya ọ bụla) na-emebi ikike ọ bụla nke ndị ọzọ.
Understand ghọtara ma kwenye na, site na iji Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ, ị bụ naanị maka data ọ bụla, gụnyere ozi amata n'onwe gị, anakọtara ma ọ bụ hazie site na Ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ anyị. Will ga-agbachitere, kwụ ụgwọ, ma jide nde ndị na - eme ihe na - adịghị njọ, na - enweghị mmachi, maka mmebi niile metụtara mmebi iwu (ebubo) nke iwu nzuzo ọ bụla site na iji ngwaahịa na / ma ọ bụ Ọrụ dị n'okpuru akaụntụ gị.
Otu ọ bụla ga-ewepụta mkpuchi zuru oke iji kpuchie ihe egwu ya ebe a, gụnyere ma ọnweghị oke na mkpuchi izugbe na / ma ọ bụ ngwaahịa. Banyere nchekwa, nzuzo na iguzosi ike n'ezi ihe nke data, ndị otu ọ bụla nwere ọrụ maka ịchekwa usoro teknụzụ na nhazi kwesịrị ekwesị maka nchedo data ejiri rụọ ọrụ na usoro nke ha nke atọ nke ndị otu ahụ metụtara.
Ndị na-eme nde mmadụ agaghị akwụ ụgwọ maka igbu oge ọ bụla n'ịrụ ma ọ bụ ghara imezu ihe ọ bụla ọ kwesịrị n'aka gị site na ihe omume ndị karịrị ikike ya.
Nde nde ndị na-eme ya ga-agwa gị ozugbo ederede ihe kpatara igbu oge ma ọ bụ nkwụsị (yana oge nwere ike) ma were usoro ọ bụla dabara adaba iji merie igbu oge ma ọ bụ nkwụsị.
Asụsụ ikpe ahụ ga-abụ Bekee. Onyinye, ikpe ma ọ bụ mmezi ọ bụla enyere n'okpuru ikpe ahụ nwere ike ịbanye site na otu ọ bụla maka ịmanye nke ụlọ ikpe ọ bụla nwere ikike.
Ọ bụrụ na enwere akụkụ ọ bụla nke Usoro ndị a na-abaghị uru ma ọ bụ na-enweghị ike itinye ya n'ọrụ, a ga-akọwa akụkụ ahụ iji gosipụta ebumnuche mbụ nke ndị otu ahụ, akụkụ ndị ọzọ fọdụrụ ga-adịgide na mmetụta zuru oke. Mgbaghara nke otu okwu ọ bụla ma ọ bụ ọnọdụ nke Usoro ndị a ma ọ bụ mmebi ọ bụla, na nke ọ bụla, agaghị ahapụ ụdị okwu a ma ọ bụ ọnọdụ ma ọ bụ mmebi ọ bụla na-esote. Nwere ike ekenye ikike gị naanị n'okpuru Usoro ndị a na ndị ọzọ na-akwado ma kwenye na ị ga-agbaso, usoro ndị a ede ede. Ndị nde Nde nwere ike itinye ikike ya n'okpuru Usoro ndị a naanị n'uche ya. Usoro ndị a ga-adịgide adịgide ma ga-erite uru maka ndị ọzọ, ndị ga-anọchi ha na ọrụ enyere ikike. Agree kwenyere na ọ dịghị nkwonkwo aka, mmekọrịta, ọrụ, ma ọ bụ mmekọrịta ụlọ ọrụ dị n'etiti gị na anyị n'ihi Usoro, ma ọ bụ ojiji nke weebụsaịtị, Ngwaahịa, na / ma ọ bụ Ọrụ.
Nkọwa Pụrụ Iche Banyere Childrenmụaka
Emebeghi ma ọ bụ zubere weebụsaịtị ahụ maka ụmụaka ndị na-erubeghị afọ 16, yana Ngwaahịa na Ọrụ anyị agaghị azụta ụmụaka na-erubeghị afọ 16. Anyị anaghị akpachara anya kpokọta ozi nkeonwe anyị site n'aka ndị ọbịa nọ n'okpuru afọ 16. Ọ bụrụ n ’ị erubeghị afọ iri na isii, enyeghị gị ikike iwebata ozi nke aka gị. Ọ bụrụ n’ị nọ n’afọ 16, ị ga-eji webusaiti naanị nkwenye nke nne na nna ma ọ bụ onye nlekọta.
Cheta * Dịka iwu, anyị anaghị eso ndị ọzọ na-ekerịta ma ọ bụ rete data nke onye ahịa anyị, rue mgbe belụsọ ọrụ achọrọ maka nke ọma site n'aka ndị mmekọ anyị, ndị ọrụ anyị, ndị na-enye ọrụ. A na-echekwa nkọwa gị nke ọma dị ka Iwu Nzuzo anyị si dị.